version 0.6.1 – Buddypress နက်ရှိုင်းတဲ့ပေါင်းစည်းမှု
သြဂုတ်လ 2, 2010 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု 8 comments
Buddypress, buddies တွေအဖြစ်ဖြစ်ချင်တယ်?
ဒီဗားရှင်း features အသစ်တစ်ခုရောနှောအပေါင်းတို့နှင့်မိသားစုများအတွက် bug ကိုပြင်ဆင်ခြင်းများ၏စုံတွဲတစ်တွဲရှိတယ်, အများဆုံးမှတ်သားဖွယ်ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးအတွက်လှုပ်ရှားမှုစမ်းချောင်းအတွက်အထောက်အပံ့ကိုမိတ်ဆက်ပေးသောနက်ရှိုင်း buddypress ထောက်ခံမှုဟာအပြင်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအသုံးပြုသူတစ်ဦးကမူရင်းတစ်ခုထက် version မတူတဲ့တစ်ဦးအသုံးပြုခြင်းပို့စ်အပေါ်မှတ်ချက်ချကြသောအခါကိုဆိုလိုတယ် – ထိုလှုပ်ရှားမှုကိုစမ်းချောင်းစနစ်တကျဘာသာပြန်ထားသောလိမ့်မည် (သင် default ဘာသာစကားဘာသာပြန်ဆိုထားပေးပြီ). အဆိုပါချောင်းရေကိုလည်းအသုံးပြုသူများအတွက် Logged ဖန်ဆင်းဘာသာပြန်ပြပါလိမ့်မယ်. အခုကျွန်တော်တို့စမှာ buddypress site ပေါ်တွင် plugins ကိုအသုံးပြုသူများအတွက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိသည် http://buddypress.org/community/groups/transposh-translation-filter-for-wordpress ဒါကြောင့်သင်သည်နှစ်ခုစလုံးကိုအသုံးပြုကြပြီးသူတို့ကိုမချစ်လျှင်, သင်သည်ဤမေတ္တာကိုပြသတဲ့အနေနဲ့ရာအရပ်ကိုရှိသည်, သင်သည်ထိုသူတို့မုန်းထိုအရပ်၌သွားလျှင်သင်သည်ငါတို့သနားလိမ့်မည်.
ကျွန်တော်မှကျေးဇူးတင်စကားထည့်သွင်းသောနောက်ထပ် feature ကို Yoav ရဲ့တင်ပြချက် တကယ်တော့ RTL ကို built in support ပြီးသော RTL themes များအတွက်ကူညီပံ့ပိုးသည် (ထိုကဲ့သို့သောနှစ်ဆယ်တဆယ်ရှိသော်အဖြစ်, နှင့် buddypress ကို default ဆောင်ပုဒ်). သင့်ရဲ့ဘရူး, အာရဗီ, ရယူ, ဒူနှင့်အဘိဓါန် Yiddish သုံးစွဲသူတွေကသူတို့ကမ္ဘာပေါ်တွင်ငြိမ်းချမ်းရေးထို့ကြောင့်အစာရှောင်ခြင်းမဖြစ်စေ Nukes တွေနှင့် gefiltes အောင်ရပ်တန့်မည်ဒါကြောင့်မင်္ဂလာရှိလိမ့်မည်.
ms နဲ့အဘို့အ Fix translate နဲ့ non လက်တင်အက္ခရာများ (ooops)
ထုံးစံဖွဲ့စည်းပုံမှာသုံးတဲ့အခါ urls နဲ့ URL ဘာသာပြန်ချက်ကိစ္စကိုပြန်ရေးရန် Fix (ဥပမာ. .html နဲ့ suffixed သည့်အခါ) (ကျေးဇူးတင်စကား Claudio)
အော်တိုဘာသာပြန်ချက်ပယ်ထားမယ်ဆိုရင် auto ဘာသာပြန်ချက်ပြင်ဆင်ရန် mode မှာအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ် (အခြား Oops)
အောက်တွင်တင်သွင်း: သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်များ အတူ Tagged: Bing (MSN) ဘာသာပြန်သူ, buddypress, အသေးအဖွဲ, လွှတ်ပေး, wordpress မှာ plugin
version 0.5.5 – Buddypress ပံ့ပိုးမှု
ဇွန်လ 18, 2010 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု 20 comments
သင်က wordpress ကိုအဘို့အသေးသင့် vuvuzelas လက်နက်ကိုင်ခဲ့ပါ 3.0 လွှတ်ပေး? ယခုသင်တို့ကိုပြု wordpress ကိုများအတွက်နောက်ဆုံးပေါ် transposh plugin ကိုအသစ်က wordpress ကိုတွေအတွက်အထောက်အပံ့ပေးသည်ဟူသောအချက်ကိုပျော်မွေ့နိုင်, နှင့်ဆုကြေးငွေအဖြစ်, buddypress တွေအတွက်အထောက်အပံ့. buddypress အဘို့ဤထောက်ခံမှုယခုကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ပြန်ပြောသည် urls ယခုဘာသာပြန်ချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုတယ်.
ပိုပြီးပြောင်းလဲမှုများ UI ကို unworkable ဖန်ဆင်းသောအခြေအနေများအတွက်နောက်ထပ်အထောက်အပံ့ကိုထည့်သွင်း, ဥပမာအား jQuery tools တွေတချို့ plugin ကိုသို့မဟုတ်ဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူအသုံးပြုခဲ့သည့်အခါ, ယခု – ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်စေနိုင်.
wordpress ကိုအသစ်အဓိကဗားရှင်းထွက်သည်ယခင်ကကတည်းကလိုပဲ, ကျနော်တို့အဟောင်းတွေ wordpress ကိုများအတွက်အရာရှိတဦးကထောက်ခံမှုကျဆင်းနေတယ် 2.8 ဗားရှင်း, plugin ကိုဆဲအလုပ်မလုပ်ရသငျ့ပေမယ်က version အတွက်စမ်းသပ်ဖာပြင်သောလိမ့်မည်မဟုတ်ပါနှင့်ငါတို့သည်သင်တို့မြှင့်တင်အကြံပြု.
ထုံးစံအတိုင်း – ငါတို့သည်သင်တို့အထဲကကြားချင်, သင်ဘာလိုချင် features တွေ? ၎င်းအဖွဲ့ကကမ္ဘာ့ခွက်ဖလားကိုအနိုင်ရလိမ့်? ့ဤအရပ်၌သင်၏ထင်မြင်ချက်များကို drop.
အောက်တွင်တင်သွင်း: အထွေထွေမက်ဆေ့ခ်ျများ အတူ Tagged: buddypress, အသေးအဖွဲ, လွှတ်ပေး, wordpress ကို 3.0, wordpress မှာ plugin